Amboary ny lalan’i Hehovah – Tsodrano
Zavatra roa no mahalasa fisainana antsika raha mijery izay voalaza ato amin’i Lioka toko faha 3 ity isika. Ny voalohany dia ny fahitana ny tantaran’i Jaona Mpanao Batisa ao amin’ny Filazantsara efatra, raha tsy misy afatsy ao amin’ny Matio sy Lioka ihany ny fitantarana ny fahaterahan’i Jesosy. Ny Faharoa dia ny fahitana ny fitanisan’i Lioka ireo mpitondra na ara-nofo na ara-panahy, izay heveritsika fa tafahoatra ny tokony ho izy.
I Lioka eto dia manambara an’i Jaona Mpanao Batisa izay mialoha lalana an’i Jesosy. Mitantara ny fitsofoan’Andriamanitra ao amin’ny tantara. Ary izany fidiran’Andriamanitra izany tsy ivelan’ny tantara akory ka nofinofy ihany fa zava-nisy tokoa, noho izany no nilan’i Lioka mitanisana ireo mpitondra maromaro hita amin’ireo andininy voalohandohany amin’ity toko faha 3 ity. Ny famonjena izao tontolo izao tsy any ivelan’izao tontolo izao akory fa ao amin’ny tantran’izao tontolo izao mihintsy. Na izany aza tsy ireo voatanisa ireo akory no hanao ny tantara fa indro ilay mpitondra teny dia Jaona Mpanao Batisa izay mpaminany farany ary vavolombelona voalohany nahita an’i Jesosy. I Lioka dia milaza azy ho ilay feo miantso mafy any an’efitra.
Raha ireo fanamboarana lalana voalaza ireo no jerena, tsy angady sy lapela fotsiny dia hahavita ireo fa Buldozer ary raha izao no jerena tsy lalakely no hiantsony hatao fa autoroute mihintsy. Mila fiovana goavana be mihitsy. Mila fibebahana lalina. Tsy ampy ilay konikona manginginatsika izay heveritsika ho fibebahana. Fa fiovana lali-paka no tadiavina. Fahafatesan’ilay izaho taloha mihitsy ary izany rahateo no Batisa lazain’i Jaona eto. Toa mampatahotra izany rehetra izany fa ny tadiavin’ny Tompo tsy ny hanameloka antsika akory fa ny mba hamonjena. Ilay lalana hatao tsy hifarana ao amin’ny impasse. Toa izao no famaranana nataon’i Isaia : Ary ny nofo rehetra hahita ny famonjenan’Andriamanitra.